एक गीशा को संस्मरणहरु: कसले यो लेख्यो, यसको बारेमा के हो | वर्तमान साहित्य
गीशाको स्मृति पुस्तक
El एक गीशा पुस्तक को संस्मरणहरु लेखकले यसलाई प्रकाशित गर्दा यो ठूलो सफलता थियो, यो दुई वर्षसम्म यो सबैभन्दा बढी बिक्रि हुने पुस्तकहरू मध्ये एक रह्यो, केही पुस्तकहरू आजसम्म पूरा भएको छ।
धेरै व्यक्तिहरू जसले यसलाई पढेका थिए र केटीहरूसँग केहि प्रचलनहरू देखेर तिनीहरू छक्क परेका थिए र कसरी उनीहरूले त्यो पेशेमा काम गरे भनेर विवादास्पद भएको बिन्दुमा, खासगरि जसमाथि उनीहरूले काम लेख्न सबैभन्दा बढी भरोसा राखेका थिए। तर तपाईंलाई मेमोइर्स अफ ए गीशा पुस्तकको बारेमा के थाहा छ? अब हामी उसको बारेमा कुरा गर्छौं र तपाईले खोज्न सक्ने सबै कुरा।
1 एक गीशाको बारे मेमोअर्सको पुस्तक के हो
2 गीशाको मेमर्समा के पात्रहरू छन्?
3 पुस्तक कत्तिको विवादास्पद थियो
4 त्यहाँ पछि अरू पुस्तकहरू छन्?
5 गीशाको मेमोर्सको फिल्म अनुकूलन
एक गीशाको बारे मेमोअर्सको पुस्तक के हो
पहिलो कुरा तपाईलाई गेमशास अफ गीशा पुस्तकको बारेमा थाहा पाउनु भनेको यो एक ऐतिहासिक उपन्यास हो। यसमा वास्तविक घटनाहरू कथित हुन्छन्, तर एकै समयमा काल्पनिक। र त्यो हो लेखक, आर्थर गोल्डन, पाँच बर्ष भन्दा बढी शोध बिभिन्न गीशासँग अन्तर्वार्ता लिदै, जसमध्ये केहीलाई अरू भन्दा बढी कागजात दिइयो। यसप्रकार, उनले वास्तविक विश्वको परिस्थितिमा आधारित काल्पनिक कथा बनाइदिए जुन दोस्रो विश्वयुद्धको सुरु हुनु अघि क्योटोमा स्थापित भयो।
उपन्यासमा लेखक हामीलाई चिओसँग परिचित गराउँछिन्, एउटी केटी जसको सौन्दर्य उसको आँखामा छ। उहाँ योरोइडोमा आफ्नो परिवारको साथ बस्नुहुन्छ र एक बहिनी छ। समस्या यो छ कि, जब आमा बिरामी पर्छिन्, बुबाले छोरीहरूको देखभाल गर्न सक्दैनन्, र तिनीहरूलाई स्थानीय व्यापारीलाई बेच्न समाप्त गर्दछ।
चियोले विश्वास गरी कि उनीलाई धर्मपुत्र बनाइएको छ, तर चाँडै उनी महसुस गर्छिन् कि उनी छैनन् र उनलाई आमाको निरीक्षणमा क्योटोको गेशा घर लगियो। त्यहाँ उनी हाट्सुमोमोको आदेश अनुसरण गर्दै नोकरको रूपमा सुरू हुन्छन् र जब उनीसँग समय हुन्छ गीशा स्कूल जान्छन्।
जे होस्, हाट्सुमोमोले उनलाई प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा देख्छिन्, र कुनै पनि हिसाबले उनीबाट छुटकारा पाउन खोज्छन् ताकि ऊ गेशा नहोस्। तर भाग्यको मोडले चियोलाई मामेहा, सिकारको सबैभन्दा सफल गीशाको सिकारु बनाउँदछ, र यसले उनलाई उत्कृष्ट गीशा बन्नको लागि तयार गर्दछ। यो गर्नको लागि, उनले सयुरीको नाम परिवर्तन गरेर सुरु गर्दछ।
हामी कथानकको बारेमा अधिक खुलासा गर्ने छैनौं, तर तपाईंले यो कुरा मनमा राख्नु पर्छ कि चियोको कथा केही अंशहरूमा कडा छ र यसले उनीहरूलाई भेट्दा पाठकलाई नराम्रो समय हुन्छ।
गीशाको मेमर्समा के पात्रहरू छन्?
यस तथ्यको बावजुद कि पुस्तक मेमोर्स अफ ए गीशा यो डायरी हो भने यो वर्णन गरिएको छसत्य यो हो कि ध्यान दिन विभिन्न पात्रहरू छन्। मुख्य व्यक्तिहरू:
चिओ। उनी अविवादित नायक हुन्, चरित्र जो इतिहासमा विकसित भएको देखिन्छ।
हात्सुमोमो। चीयोको प्रतिद्वन्द्वी। उनी धेरै सुन्दर र धेरै सफल छिन्, तर उनको घृणा, ईर्ष्या र अहंकारले उनीलाई अन्धा बनाउँदछ कि कसैलाई पनि उनको भन्दा माथि हुनबाट रोक्नको लागि कुनै योजना बनाई छोड्नुभयो।
पम्पकिन। उनी गीशाको घरमा आइपुग्दा चिओको पहिलो साथी छिन्। उनीसँग छोटो अवधिको लागि ठूलो सफलता छ, हात्सुमोमोले उनलाई चियोबाट टाढा राख्न सहयोग गरे।
मामेहा। उनी अर्का गीशा हुन्, जुन जिल्लामा सब भन्दा राम्रो छ, र उनीसँग आफ्नो स्वतन्त्रता पनि छ जसमा एक डन्ना छ जसले आफ्नो खर्च तिर्दछ (एक मानिस जसले उसलाई तिर्दछ)।
राष्ट्रपति। उसको नाम Iwamura केन छ र उनको Chiio संग धेरै भेट भयो। उनको लागि यो एक गीशा बन्न को कारण छ।
जनरल तोतोरी यो चिओ (सयुरी) को पहिलो डाना हो।
पुस्तक कत्तिको विवादास्पद थियो
गीशाका संस्मरणहरू एउटा पुस्तक हो जसले एनेस्थेसिया बिना, परिवारको एक छोरीको जीवन "बेचे" जबसम्म उनी गीशा नहुन्जेल देखिन्छ। यद्यपि यो पूर्ण रूपमा काल्पनिक होइन, तर वास्तवमै ती अनुभवहरूमा आधारित छ जुन केही महिलाहरूले यसको लेखक आर्थर गोल्डनलाई भनेका थिए। ती मध्ये एक, मिन्को इवासाकी थिइन् जसले उपन्यासको सबैभन्दा बढी पहिचान गरे, र यस कारणले, यो प्रकाशित भए पछि उनले यसको आलोचना गरे किनभने यसले लेखकको अनुबन्ध भached्ग गरेको थियो (इवासाकीका अनुसार उसले उनको पूर्ण अज्ञातताको ग्यारेन्टी गरेको छ। किनभने त्यहाँ गिशास बीच मौनताको कोड छ र यसलाई तोड्नु ठूलो अपराध हो)।
साथै, इवासाकी शब्दहरूमा, मेमोइर्स अफ ए गीशा भन्ने पुस्तकले संकेत गर्‍यो कि गीशा केवल माथिल्लो श्रेणीका वेश्याहरू थिए, जब वास्तवमा यो थिएन। न त यो सत्य हो कि इवासाकीका आमा बुबाले उनलाई गेशामा बेचे वा उनको कुमारीत्व उच्च बोलीदातालाई लिलामी गरे।
यस टकरावलाई लेखक र गीशा बीचको गैर-न्यायिक सम्झौतासहित हल गरिएको थियो र त्यो राशिको खुलासा गरिएको थिएन।
त्यहाँ पछि अरू पुस्तकहरू छन्?
त्यहाँ गीशाको मेमर्ससँग मिल्दोजुल्दो पुस्तकहरू छन्, तर यो भागको दोस्रो भाग होईन। अब, मिन्को इवासाकीको मुद्दा चलाइसकेपछि उनले एक पुस्तक प्रकाशित गरे, एउटा आत्मकथा, जहाँ उनले गीशा कस्तो देखिन् भनेर साँचो कथा बताइन्। उनको शीर्षक थियो लाइफ अफ ए गीशा र २०० in मा प्रकाशित भयो।
गीशाको मेमोर्सको फिल्म अनुकूलन
तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि पुस्तक, बिक्रीमा भएको सफलता पछि, धेरै निर्माण कम्पनीहरूको लक्ष्य थियो जुन यसलाई ठूलो स्क्रिनमा लैजान चाहन्थे। र तिनीहरू सफल भए।
किताबको अनुकूलन, जसको शीर्षक उही थियो, पुस्तकमा के भनिएको थियो त्यसको केही अंश झल्काउँछ, यद्यपि सबै होइन, र वास्तविक कथाको सन्दर्भमा केही टुक्रा बदल्दै। उदाहरणको लागि, चलचित्रको सबैभन्दा नाटकीय दृश्यमध्ये एउटा आगो हो, जब सयुरीको कोठाले हात्सुमोमोसँग बहस गरेपछि आगो समात्यो र उनी पछाडि पक्षबाट खस्कियो। पुस्तकमा, गिरावट सुस्त छ, र अन्त्यमा मामेहा र सयुरीले उनलाई अन्तिम धक्का दिन्छन्, उनलाई वेश्याको रूपमा दर्शाउँछिन् (चलचित्रमा उनी हराउँछिन्)।
यद्यपि यो पनि एकदम सफल भयो र केहि समयको लागि पुस्तक फेरि शीर्ष विक्रेता बनायो।
यस कारणका लागि, हामी सँधै किताब पढ्न सिफारिस गर्छौं किनकि यसले एक दर्शन दिन्छ, कहिलेकाँही टेलिभिजनमा देखाइएको भन्दा बिलकुलै फरक हुन्छ (वा सिनेमामा)।
के तपाईंले गीशा पुस्तकका संस्मरणहरू पढ्नुभयो? तपाइँ यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? हामी तपाईंको राय सुन्न चाहन्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » गीशाको स्मृति पुस्तक
जुन दिन आकाश झर्छ